Mbola RAJAONAH an-tsolosainan'ny BIANCO
Réseau Malina 05 Desambra 2018 2989 vues
Ataon’ny BIANCO (Birao tsy miankina amin’ny fanjakana miady amin’ny kolikoly) fanadihadiana amin’izao fotoana izao, Andriamatoa Mbola Joseph Rajoanah, fantatra amin’ny anarana hoe “Mbola Tafaray”, mpanolo-tsaina manokana an’i Filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, voarohirohy fa nanao fanambarana diso anivon’ny fadintseranana.
Nanomboka ny 4 jolay 2017 ny raharaha, rehefa nangataka ny fanokafana ireo antontan-taratasy mirakitra ny asa maman-draharaha sahanin’ Andriamatoa Mbola Joseph Rajaonah ny mpitantana ny Birao-paritry ny Bianco faritra Antsinanana. Fanapaha-kevitra vokatry ny fitarainana maromaro azon’ny Bianco volana vitsivitsy lasa izay.Tsy havoaka eto ny anarana nahazoana ny loharanom-baovao mba hitsinjoana ireo nametraka fitarainana. “Mbola tsy afaka havoaka ihany koa ireo fiampangana satria mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka izahay. Tsara ny mampahafantatra anareo fa betsaka ireo heloka ara-toekarena sy ara-bola afaka hadihadiana avy amin’ny fitarainana voaray sy ireo fanadihadiana natao tany aloha tany.” Voafaritra ao anatin’ny fihadidian’ny Bianco ireo zavatra tsy ara-dalàna azo avy amin’ireo vaovao ireo, hoy ny Tale Mpitantana ny Bianco, Jean Louis Andriamifidy, nandritran’ny resadresaka niarahana taminy tao Ambohibao ny zoma faha 23 novambra teo.
Tsy nekena nefa koa tsy nolavin’ny tompon’andraikitra volaohany ao amin’ny Bianco ny fifandraisan’ito raharaha ito amin’ireo tsaho mandeha mikasika ny fanondranana andramena antsokosoko sy ny raharaha fanambarana diso niparitaka tamin’ny haino aman-jery, herinandro vitsivitsy lasa izay.
“Manaja ny tsiambara-telon’ny famotorana izahay, ka miandry ny fiafaran’ny fanadihadiana.
Mifandraika manokana amin’ny asa aman-draharahan’Andriamatoa Rajaonah ihany ireo fandikan-dalàna ireo”, hoy ny Tale teo ampamaranana.
Tsy naniry ny hamaly ny fanontaniana mahakasika ny votoatin’ny antotan-taratasy na farafaharatsiny ny anton’ny fiampagana an’Andriamatoa Rajaonah momba io raharaha io ny mpisolovava azy, Maître Eric Rafidison.
Nanamafy izy fa manara-dalàna ny olona arovany sy ireo mpiara-miasa aminy, ary ny fahanginany dia milaza fa manaja ny tsiambara-telon’ny famotorana.
Efa mailo ihany koa Andriamatoa Tolojanahary Ramaherison, mpiasan’ny faditseranana ao Toamasina. Tsy nilaza na inona na inona momba io raharaha io izy taminay ho an’ny fandehan’ny fanadihadihana. “Tsy manana vaovao omena anareo, tsy mahafantatra na inona na inona aho”, hoy izy raha nangataka fanehoan-kevitra avy aminy izahay. Nambarany tamin’izany fa efa tsy mandeha intsony ny orinasan’Andriamatoa Rajaonah, vaovao voamarina tamin’ny olona hafa, olona anisany mpamatsy ny orinasa teo aloha. Andriamatoa Ramaherison dia nanambara taminay fa ny Bianco dia nandefa fitsirihana tsy tapaka matetika teo anivon’ny mpiandraikitra mba ahazoany ny famenon’ny fanadihadiana. Fanambarana izay nohamafisin’ny tale jeneralin’ny BIANCO, Jean Louis Andriamifidy. Tena nisy ny fidinana nataon’ny Bianco mikasika ireo asan’ny “Mbola Tafaray” teo amin’ny fadin-tseranana.
Ireo rehetra ireo dia mahatonga antsika hieritreritra fa ny fiampangana voalohany an’Andriamatoa Rajaonah dia mikasika ny asan’ny orinasany Tafaray eo anivon’ny fadin-tseranana. Fa ny oe hatraiza ny fitoriana azy no mbola tsy fantatra hatreto.
Ho an’andriamatoa Jean Louis Andriamifidy, tonga ny fotoana anatsaharana ny fahazaran-dratsin’ireo tsy maty manota eto Madagasikara.
Asa izay mbola lavitra ezaka
Iharana fanadihadiana roa samy hafa nefa misy hifandraisany Andriamatoa Mbola Rajaonah, araky ny vaovao azon’ny Bianco farany. Ilay resaka Toamasina no voalohany. Nisedra olana misimisy ny Bianco hatramin’ny namoahana ny raharaha momban’ito tanora mpandraharaha ara-toekarena matanjaka ito tamin’ny taona 2017.
Marihina fa ny 17 septambra 2018, ny tale jeneralin’ny Bianco dia nandefa taratasy fangatahana tsy fahafaha-miala ny fari-dranomasina (référence N°496-18/BIANCO/DG/IS) ho an’Andriamatoa Mbola Rajaonah teo anivon’ny Ministeran’ny Mponina sy Fanapariaham-pahefana. Nanaiky izany izy ireo ary nametraka ny tsy fahafahana nanomboka ny 13 novambra 2018 (référence n°228-MID/DGQT/DIE/SCE). Fa nampiatoan’ny tao amin’ny Filankevi-panjakana ambony izany, telo andro taorinan’ny fametrahany fangatahana manokana.
Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana amin’ny raharaha faharoa rehefa nandefa solotenan’ny fitsarana ny Sampana miady amin’ny kolikoly ny 27 Jolay 2018. Misy tompon’adraikitry ny Bianco momban’io raharaha io ao Toamasina. Arak’izany, nanome ny Bianco telo volana hanangonana porofo ny PAC.
Tokony nanome tatitra feno eo anivon’ny fampanoavanan’ny PAC ny 19 oktobra 2018, nefa nohon’ny fahasarotana sy ny fitandroana ny filaminana dia nangataka fanalavam-potoana mba hamenoana ny porofo ny Bianco.
Efa ho efa-bolana izao ny fanadihadiana an’Andriamatoa Mbola Rajaonah mikasika an’ilay raharaha faharoa, fa mbola tsy nivoaka ny didy fisamborana azy hatreto. “Mandroso moramora, milamina dia mitsaika isika”, hoy ny tenin’ny Tale Jeneralin’ny Bianco, Jean Louis Andriamifidy.
Ny mpampita vaovao izay ao amin’ny Bianco izay mangataka ny tsy hilazana ny momba azy nohon’ny tsy fahazahoany alalana teo anivon’ny lehibehany. Izy izay manambara fa misy ny fivoahan’ny fanadihadihana izay mety hanelingelina amin’ny fanatanterahana ny fanadihadiana. Misy amin’izany ny dika mitovy ny disy izay tsy fahafahan’andriamatoa Mbola Rajaonah mivoaka ny tany malagasy iza nivoaka teo anivon’ny tambazotra “facebook” avy amin’ny ministera ny atitany, nefa izany antotan-taratasy izany dia tokony ho tsiambaratelo ihany.
“Tsy afaka ny hanamarina n’inon’inona ny tenako, Mbola Rajaonah dia olona ambony. Azo heverina ny fananany tambanzotra matanjaka eo anivon’ny fanjakana malagasy. Manambola izy. Raisin-tsika ohatra ny fisavana trano ny alakamisy teo (22 novembre 2018) teo Ambohimahitsy teo aminy. Tonga teny antoerana tamin’ny 5:30 maraina ny mpiara miasa teto aminay. Tsy afaka niditra izy ireo raha tsy afaka ora telo taoriana, ary ny tompon-trano izay voapanga dia efa tsy tao intsony. Ny azonay ambara dia hoe efa nisy nampilaza izy ny alina teo alohan’io andro io ary efa nentiny nanaraka azy ny taratasy rehetra izay porofo mety hiampangana azy. Manarak’izany refa tsy ao ny tompon-trano dia tsy afaka hanatanteraka ny asanay ankahalalahana izahay” araka ny nambaran’ity mpilaza vaovao.
Ho fampitsahivana ny 22 oktobra 2018, ny Bianco dia nanao fisavana trano niaraka teo amin’ireo trano telo an’i Mbola Rajaonah izay teo Ambohimahitsy, Antsobolo, Ambanidia, ary teo amin’ny biraony. Olona roa avy amin’ny Bianco, niaraka tamin’ny olona roa avy amin’ny vondron tafika (EMMO/REG) ary olona roa avy amin’ny fokontany no nanatanteraka ny fisavana ho fikarohana porofo.
Teo Ambohimahintsy, trano fonenan’ilay voapanga, no nahitan’ny mpanadihady “disque dur” sy antotan-taratasy izay hampandroso amin’ny fanadihadiana. “Eo amin’ny heloka ara toe- karena sy ara- bola, dia itony no fitaovana alaina voalohany. Efa ao anatin’izany izahay izao ary miandry ny valin’ny fanadihadiana” nambaran’ny tale jeneralin’ny Bianco.
Efa tato anatin’ny roa herinandro lasa no efa nanombomboka resaka malaza teto Madagasikara ny momba an’i Mbola Rajaonah. Efa betsaka ny tsaho sy ny fosafosa nandritra izany. Anisany manana vondrona haino aman-jery lehibe eto Madagasikara izy, eo ny orinasa “RLM Communication”. Ny fifandraisany akaiky amin’ireo mpanao politika dia anisany mahatonga azy ho voatily, ny fahavalon’ireo olona tohanany izay anisany maniry ny halavoany.
Mifanandrify amin’izany indrindra dia ahitana ady eo amin’ny tontolon’ny serasera izay mikendry ny hanilihana ny Bianco. Na ny vaovao aza dia hita fa mifanohitra eo amin’ny tontolon’ny fanaovan-gazety. Manakorontana ny fanadihadiana sy manimba ny famotorana ny fiverenan’ny kaonty sandoka tsikelikely eny amin’ny tambazotra sosialy. Noho izany, nandritra ny fisavana tao Ambohimahintsy, tsy nitady ilay mody natao oe “logiciel” nolazain’ny mpanao gazety sasatsasany mpomba an’Andriamatoa Mbola Rajaona ireo mpanao famotoran’ny Bianco : “Raha nitady “logiciel” izahay dia tany amin’ny CENI no nandeha” hoy ny Tale Jeneralin’ny Bianco, nanamarina.
Tao anatin’ny fanambarana navoakan’ny Bianco, tamin’ny 23 novambra 2018, mamaritra tsara fa tsy misy idiran’ny resaka politika io raharaha io. Ratsana mifototra indrindra amin’ny fitsarana momba ny kolikoly avy amin’ny Sampana miady amin’ny kolikoly ny Bianco. Ho fiarovana an’Andriamatoa Mbola Rajaonah, amin’ny lafiny iray, tena misy ambadika politika mihitsy izany. Izay no nihindrahindran’ny mpisolovavany, Maître Eric Rafidison, tamin’ny fiantsoana azy fanindroany tany amin’ny Bianco, ny alatsinainy 19 novambra lasa teo, tao aorian’ny fisavana trano naharitra ora valo tao Ambohimahintsy telo andro lasa izay. “Amiko, lasibatry ny teti-dratsy politika mikendry ny faminganana azy ny olona arovako”.
Nandritra ny fidirany antsehatra tao amin’ny onjam-peony AZ Radio ny asabotsy 24 novambra, nanamafy ny fanambarana nataon’ny mpisolovavany Andriamatoa Mbola Rajaonah : “Iharan’ny fiampangana diso noho ny toerana politika misy ahy aho. Araky ny hitanareo, omeko ampiasain’ny kandidà n°25, Marc Ravalomanana ny orinasa famokarana gazetiko noho ny antony ahy manokana. Mitady firehana politika sy toekarena milamina aho ahafahako mivelatra sy miasa hampadrosoana ny fireneko amin’ny maha mpandraharaha ahy. Tsy manana lonilony amin’ny mpanenjika ahy aho amin’izao fotoana izao, namako daholo izy ireny, na ny kandidà n°13 aza. Mikendry ahy izy rehefa tsy nanaiky hiara hiasa aminy aho, izay tsy rariny. ny kandidà n°25 no manampy ny orinasako amin’ny fampidirambola avy amin’ny fampieleza-kevitra ataony. Farafaharatsiny mba mifanaja fa hevitra no ampiadiana amin’ny sehatra politika.” Nangataka amin’ny Bianco mba hanokatra fanadihadiana amin’ny trangana kolikoly hafa izy, izay mety ahatratrana olo-manakaja, mba tsy hiasana indroa.
Nanomboka ny volana septambra, nihataka tamin’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina Andriamatoa Mbola Rajaonah. Mazava fa noho ny antony tsy firaisan-kevitra ara-politika sy ideolojika no anton’io fisarahana io. Efa napetraky ny mpomba an’Andriamatoa Mbola Rajaonah tamin’izany ny sehatra antsoina oe “Tafaray”, arany ny resadresaka niarahana tamin’Andriamatoa Berija Ravelomanantsoa, mpitantana ny Fikambanana Solidarité des Leadres Universitaires de Madagascar (na SOLUMA). Mipetraka ho andrin’ny “Tafaray” ny Fikambanana SOLUMA sy “Fitoniana Tour” izay an’’Andriamatoa Sambahita Aimé François.
Fifanarahana mahatalanjona eo amin’ny kandidà n° 25 sy ilay mpandraharaha ahiana manao kolikoly.
Ny kandidà Marc Ravalomanana no voalohany hahazo tombotsoa avy amin’Andriamatoa Mbola Rajaonah amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mailo hatrany Andriamatoa Serge Zafimahova, mpandrindra voalohany ny fampieleza-kevitry ny kandidà Ravalomanana momban’ny fifandraisan’ny kandidàny sy io mpandraharaha ara-toekarena io. Nanizingizina ny lafiny fitoniana hatrany izy teo ampamaliana ny fanontaniana mikasika ny fiaraha-miasan’ireo kandidà sy ny “antony” amin’ny tranga mifandraika amin’ny kolikoly. “Tsy hampitombo ny fifandirana efa misy izahay. Sady tsy miara-miasa afatsy amin’ny tompon’andraikitry ny RLM-COMMUNICATION izahay. Asehoy anay raha manana porofo amin’ny fiaraha-miasa an’ireo olona ireo ianareo [ndlr : Marc Ravalomanana sy Mbola Rajaonah], na sary ahitana azy ireo mifandray tanana, hoy Andriamatoa Zafimahova tamin’ny resadresaka natao.
Marihina fa manantena vokatra tsara amin’ny fihodinana faharoa ny komity mpanohana an’Andriamatoa Marc Ravalomanana amin’ny fahatongavan’ny mpiara-miasa sy mpanohana vaovao. Mihevitra ny handresy amin’ny elanelan’isam-bato goavana izahay. Hitanareo angamba ny valin’ny fihodinana voalohany, tsy ampy ny volanay na oe tsy nampiasa vola be izahay, kanefa nahazo vokatra nahafa-po. Hahazo vato betsaka izahay amin’izao fa efa manana fitaovana sy mirindra kokoa, hoy hatrany Andriamatoa Serge Zafimahova.
Nandritra ny resadresaka nataonay tamin’Andriamatoa Serge Zafimahova ny alin’ny 22 novambra, nisy taratasy navoakan’ny komity mpanohana an’Andriamatoa Marc Ravalomanana. Izay maneho ny fanohanany ny vondron’ny mpanao gazety RML-Communication an’Andriamatoa Mbola Rajaonahy.
Mbola mandeha ny fanadihadiana ataon’ny Bianco. Mbola tsy tapitra ny famotorana araky ny vaovao nangonina teny amin’ny foiben’ny Bianco eny Ambohibao. Araky ny fandaharam-potoana napetraky ny Sampana manohitra ny kolikoly, hiantoka ny tohin’ny raharaha eny amin’ny fitsarana izy rehefa tapitra ny famotorana. Mety hanara-diha an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy – ilay mpanolotsaina ny Filoham-pirenena, teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay mbola any am-ponja hatramin’izao – Andriamatoa Mbola Rajaonah raha mitombona ny fiampangana azy.
Ireo kaontenera radiôactifa sy ny fanjavonan'izy ireo tao amin'ny seranan-tsambon'Antsiranana